Harmeen ishee duunaan poolisiin ajjabamtee booyicha harmee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHarmeen ishee duunaan poolisiin ajjabamtee booyicha harmee
Harmeen ishee duunaan poolisiin ajjabamtee booyicha harmee ishee geessee Mana hidhaatti deebite.
Tibbana Ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaan Wal qabatee mootummaan hayyoota siyaasaa hanga gaazexeessitootaa sabaa himaaleetti, Activistootaa hanga daa’ima harmee ishee waliin Mana hidhaatti ugguraa jira.
Gaazexeessitootaa LTV duraanii Beteleyeem Taaffasaas namoota humna waraanaan magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii hidhaman keessaa tokko tahuu SQ mirkaneeffateera.
Beteleyeem sababaan itti hidhamte amamaf ifatti himamuu baatus ogummaa isheen ammaan dura namoota foddaa TVn gaafachaa turte ilaalcha mootummaa faallessu jechuun akka hidhamuu hin hafne namoonni itti dhiyyeenyaan beekan nuuf himaniiru.
Beteleyeem Taaffasaas erga Mana hidhaatti darbamtee torbaan lamaaf tahuu deemus hanga ammaa garuu sababaa tokko malee Mana hidhaatti ugguramtee akka jirtuu fi guyyaa lama dura harmeen ishee balaa tasaan yeroo Addunyaa kana irraa boqotan poolisiin ajjabamtee akka boo’icha harmee ishee geessee deebite namni ijaan arge SQf himeera.
Beteleyeem Taaffasaa erga hojii Gaazexeessummaa lakkistee kitaaba barreessaa turte maxxansuuf gara xumuraa irra geessee akka jirtu dubbachaa turte.